हाम्रो एक भोट कतै भ्रष्टाचारको लाइसेन्स त बन्दै छैन ? भोलि धारे हात लाएर नेतालाई सराप्नुभन्दा आजै सचेत बनौं | Makalukhabar.com
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भइ नै सकेको छ । निर्वाचनपछि जे जस्ता परिदृश्यहरू देखिए, त्यसको समीक्षा जरूरी छ । मंसिर १४ गते हुन गइरहेको उप-निर्वाचनको जिम्मा दल र नेताहरूलाई मात्र सुम्पिएर हामी मतदाता कानमा तेल हालेर बस्ने अबस्था छैन ।
कुनै एकजना नेतालाई जिताएर वा कुनै एउटा पार्टीलाई बहुमत दिलाएर मात्र हाम्रो कर्तब्य पुरा हुँदैन । त्यसबाट दलहरू, नेताहरूले मात्रै नभएर हामी मतदाताहरूले पनि सिक्नुपर्ने शिक्षा र सच्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन् । मतदाताहरूले पनि आफ्नो मनोवृत्ति फेर्ने हो भने देशलाई चाहिने असल, कुशल र दूरदृष्टि राख्ने ब्यक्तिहरूलाई विजयी गराउन सम्भव छ । सरोकारवाला सबै पक्ष यसका लागि प्रतिबद्ध छ ? सरकार र उम्मेदवारलाई छाडिदिउँ, के हामी मतदाता तयार छौं र ?
हामी मतदाताहरूले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने, हाम्रो एक भोट कतै भ्रष्टाचारको लाइसेन्स त बन्दै छैन ? अहिले चुनावमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्नेले भोलि त्यसको साँवा र ब्याज नअसुली छोड्छ ? पक्कै असुल्छ । त्यो हामी जनताको नाममा आएको बजेटबाटै अयो देशलाई बिगार्ने राजनीतिक ठेकेदारहरूको हामी मतदाता पनि मतियार हुनेछौँ ।
देश बनाउने हतियार हाम्रो हातमा छ, हतियार सही निसानामा भेदन गरौँ । कोही कसैको मतियार नबनौँ । तपाईं हाम्रो एक मतले देश सुखी र समृद्ध बन्न सक्छ । भोलि किनारामा बसेर धुरूधुरू रूँदै धारे हात लाएर नेतालाई सराप्नुभन्दा आजै सचेत बनौं । निर्वाचनको अर्थ वास्तवमा जनता आफ्नो मालिक आफैँ बन्नु हो । तर बिडम्बना, हामीले जुन लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरिरहेका छौँ, यसले जनतालाई मालिक होइन दास नै बनाइरहेको छ । समाजको सबैभन्दा पीँधमा पारिएको बर्ग, लिंग, जाति यस्तो निर्वाचनबाट कहिल्यै माथि उठ्न सकिरहेका छैनन्।
प्रायः सबै दलहरूभित्र टिकट वितरणमा पक्षपात र पैसाको लेनदेन भएको गुनासो सार्बजनिक भइरहेका हुन्छन् । अझ महिलाको सन्दर्भमा भन्ने होभने सबै दलहरूभित्र झनै पक्षपात भएको देखिन्छ । टिकटको लागि शरीरसम्म सुम्पिनु पर्ने लज्जास्पद खबरहरू पनि बजारमा सुनिन थालिएको छ । हाम्रा पुरूष नेतागणहरूको भविष्यवाणी छ, 'महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्दैन । त्यसैले टिकट दिएर के काम ?' प्रतिस्पर्धैविना परिणाम सुनाउने यो कस्तो तरिका हो ? प्रतिस्पर्धा गर्न दिएपछि न थाहा हुन्छ, परिणाम कसले ल्याउँछ भनेर । दलहरूको कस्तो लोकतन्त्र हो ?
अहिले पनि नवगठित मन्त्रीमण्डलमा महिला मन्त्रीको सङ्ख्या २ मात्र छ भने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा महिला मन्त्री नभई पुरुषलाई सुम्पिएको छ यस्तो अवस्थामा नेपालमा महिला हक अधिकार तथा आरक्षणको कुरा कानुनमा मात्र सिमित छ । अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म कसैको निगाहमा बाँच्नु पर्ने वाध्यता रहिरहन्छ । यसको लागि आवश्यक परे नीति निर्माण तहमा रहेका महिला नेतृत्वले पार्टीको घेराभन्दा माथि उठेर संघर्षको अगुवाई गर्ने र सबै महिलाले निशर्त सहयोग गर्ने आँट गर्न जरूरी छ ।
मलाई महिलावादीको आरोप पनि लगाउन सक्नुहुन्छ । स्वीकार गर्छु म आरोप । किनकि, नारी सौन्दर्यको ब्यापार चलुन्जेल समाजमा नारी र पुरूष समानताको नारा फगत नारामा मात्र सीमित रहनेछ । निर्वाचन जनताको लागि उत्सव हुनु पर्ने हो । तर शासकहरूको स्वार्थ, नेता, कार्यकर्ताको अदुरदर्शिता र मतदाताहरूको अचेतनताको कारण यो निर्वाचन देश र जनताका लागि अभिशाप बन्दैछ । मतदाताहरूलाई डर, धाकधम्की र बिभिन्न प्रलोभनमा पारी मत प्राप्त गर्ने उही पुरानो खेलको पुनरावृत्ति हुने देखिन्छ ।
हामीले अझै पनि यिनैलाई जिताएर भ्रष्टाचार दुगुना पार्ने ? अझै पनि यिनलाई जिताएर दण्डहिनता तीनगुणा पार्ने ? अझै यिनीहरुलाई जिताएर राज्यकोषको दोहन चौगुणा पार्ने ? यतातर्फ सोच्नु जरुरी छ ।
वडा कार्यालयमा आगजनी, मृत भेटिए एक युवक
जन्मदाको खाट अलग, मर्दाको घाट अलग
विश्वका चर्चित बडी बिल्डर आर्नल्ड कुनैबेला क्यालिफोर्नियाको गभर्नर थिए । जुनबेला उनी गभर्नर थिए, एउटा होटलले आफ्नो हातामा उनको शालिक बनायो । उनैबाट होटलको भव्य उद्घाटन गराउँदै घोषणा गरियो– ‘आर्नल्डले चाहेको समयमा त्यो होटलमा निःशुल्क बस्न पाउने छन् ।’ समयको पदचापसँगै उनी पदविहीन भए । शरीर जीर्ण हुँद... जारी राख्नुहोस...
डाक्टरसँग बदला लिन अस्पतालभित्र ताेडफाेड, ४० जना वकिल पक्राउ
काठमाडौंमा फ्युजमेशिन्स आइसिटी स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेसन मेला आयोजना हुँदै